पोखरा, २६ भदौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र गोदावरी भिलेज रिसोर्ट गोदावरी, टौखेल र होटेल ग्रिनबीच भिलेज कुपन्डोलबीच सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौता बमोजिम मुक्तिनाथका डेविट तथा क्रेडिट कार्ड भएका सबै ग्राहकलाई उक्त होटेलको सेवा सुविधा लिए वापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्चमा १० प्रतिशत विशेष छुट दिने व्यवस्था भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र गोदावरी भिलेज रिसोर्ट/होटेल… पुरा पढौ
पोखरा, २४ भदौ ।नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीको १४ औँ अधिवेशनवाट अध्यक्ष्मा सुरेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । लोकतान्त्रिक प्यानलका श्रेष्ठले प्रतिष्पर्धी वाम प्यानलका आनन्द वराललाई पराजित गरेका हुन् । श्रेष्ठले २१० मत प्राप्त गर्दा वरालले १२३ मत पाए । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वाम प्यानलका रामराज अधिकारी विजयी वने । उनले २०६ मत पाउदा लोकतान्त्रिकका वलवहादुर रानाले १२२ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा पनि वाम गठबन्धनकै हरी लम्साल… पुरा पढौ
पोखरा, २३ भदौ।जनसहकारी उपभोक्ता सहकारी सस्था लि. पोखरा-१७ को नवौं वाषिर्क साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सभासद प्रभा कोइरालाले सहकारी बलियो बनाउने स्थिर सरकारको आवश्यकता भएकाले अब सहकारी बलियो बनाउन सजिलै हुने बताइन्। कार्यक्रममा कृषि सहकारी मन्त्रालयका उप-सचिव माधव लम्सालले प्रादेशिक संरचना बलियो भएपछि सहकारी बलियो हुने बताए। संस्थाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला… पुरा पढौ
लेखनाथ, १६ भदौ । लेखनाथ हार्डवयर एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापन गरिएको छ । पोखरा २७, सतिफाँटको छैटौ वाषिर्क साधारणसभा तथा तेश्रो अधिवेशनले दुर्इवर्षे कार्यकालको लागि विजय गुरुङसहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुको पदस्थापन गरिएको हो । तीन सदस्यीय निर्माचन मण्डलमा, राजेन्द्र ओझा, र भक्तवहादुर केसी थिए भने नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई अधिवक्ता मदन तिवारीले पद तथा गोपनियताको सफथ गराएका थिए । 'गुणस्तरिय निर्माण सामाग्री हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने… पुरा पढौ
लेखनाथ, १६ भदौ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले आफ्नो सहकारी उत्कृष्ट बनाउन सबै लाग्दा समाज समृद्ध बन्ने बताएका छन्। पोखरा-१२ पुरानोधारास्थित चापापानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नवौं वाषिर्क साधारण सभाको शनिवार उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख जिसीले भने- सहकारी भनेको सहकार्य हो । पोखरा महानगरभित्र तीन सय १९ वटा सहकारी रहेको उल्लखे गर्दै उनले सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। वडा… पुरा पढौ
पोखरा, १६ भदौ । कृषि उपज बजार पोखरा-९ अन्तर्गत महिला समूहको तेस्रो अधिवेशनले राधिका थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। समिति उपाध्यक्ष मीना गिरी, सरस्वती श्रेष्ठ, सहसचिवमा रञ्जिला अधिकारी र कोषाध्यक्ष रेणु हमाल छन्। सदस्य कल्पना थपलिया, अस्तिमा ढकाल, सीता कोइराला, विदिसा उप्रेती, रीता लामिछाने, मीना अधिकारी, गंगा अर्याल, सिर्जना सुवेदी, सञ्चिता मैनाली चयन भए। सल्लाहकार मीठु गिरी, माया… पुरा पढौ
लमजुङ, १३ भदौ। जिल्ला सदरमुकाममै सञ्चालनमा रहेको अधिकांश पसल बिना दर्ताका भेटिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा बुधबार त्यस्तो फेला परेको हो। वेशीशहरको सहजी बजार र मनाङे चौतारादेखि, हाइस्कूल चोकदेखि पुरानो बैँक चोकदेखि घलेगाउँ चोकसम्म गरिएको अनुगमनमा अधिकांश पसलहरू बिनादर्ताका फेला परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहर थापाले बताए। उनका अनुसार टोलीले संचालनमा रहेका सबै पसलहरूको… पुरा पढौ
खैरेनीटार, १३ भदौ। सोलार र्फम प्रालिलेे शुक्लागण्डकी-५, बेलचौताराबाट नेपालमा पहिलो पटक ५ मेगावाटको सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने भएको छ। सोलार प्लान्टबारे जानकारी दिँदै कम्पनी अध्यक्ष मोहन गुरुङले २३ हजार प्यानल राखेर ५ मेगावाटको सौर्य उर्जा उत्पादन गराउने बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कनेक्सन सम्झौता र टेरिफ दर निर्धारण गरि एनर्जी टेवल सदर गराइ पीपीए -विद्युत् खरिद सम्झौता) समेत गरिसकिएको बताए।… पुरा पढौ